१० ट्विटर गल्तीहरू Martech Zone
१० ट्विटर गल्तीहरू
बुधबार, जुन 12, 2013 मङ्गलबार, जुन 11, 2013 Douglas Karr
आधा दर्जन ट्विटर खाताहरू प्रबन्ध गर्ने केटाको रूपमा (व्यक्तिगत, पुस्तक, कम्पनी, ब्लग र समुदाय), म यो इन्फोग्राफिकमा # with सँग असहमत छु। म नौसेना दिग्गजहरु मा मेरो शक है @Navyvets ट्विटर खाता कर्पोरेट ब्लगि aboutको बारेमा सुन्न चाहन्छ कर्पब्लॉगिंग... र मेरो व्यक्तिगत खातामा कसैले पनि मेरो राजनैतिक सुनुवाई सुन्न चाहँदैन!
ट्विटर, कुनै पनि अन्य प्लेटफर्म जस्तै, व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नको लागि अर्को तरिका हो। र त्यहाँ केहि बिरामी सल्लाह दिईएको ट्वीटर अभ्यासहरू र असफलताहरू छन् जुन उनीहरू ट्विटरमा तान्न समेत शable्कास्पद हुन सक्दछन्, वास्तवमा सार्वजनिक रूपमा गरेको बेला अझ बढी हानिकारक हुन्छन्। त्यसोभए यदि तपाईं न्यायको यी १० त्रुटिहरू मध्ये कुनै पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने (मीठो) ड्यासबर्स्ट संग सहकार्य म्यापल किसिम) तपाईंको ट्वीटमा वा सडकमा खराब पनि, कृपया तुरुन्त रोक्नुहोस्!
म आवधिक प्रेरणादायक उद्धरण (#)) प्रेरणाको लागि ट्वीटको पनि कदर गर्दछु!
टैग: ड्यासबर्स्टट्विटर गल्तीहरू
लोकालेटिक्स: मोबाइल अनुप्रयोग एनालिटिक्स र अनुप्रयोग मार्केटिंग
सामाजिक मीडिया एक संकट व्यवस्थापन उपकरण को रूप मा
MOS SEO सेवाहरू
जुन २,, २०१ बिहान :17:२२ बिहान
मैले केहि बुँदाहरू गलत देखिन। वास्तविक जीवनमा मानिसहरूले व्यवहार गर्ने तरिका यही हो। तर उनीहरू ट्विटरमा यस्तो व्यवहार गर्दैनन्।
मलाई विश्वास दिन को लागी धन्यवाद कि केहि ब्यक्तिहरु मेरो जस्तै व्यवहारहरुबाट टाढा छन्! म स्वीकार गर्दछु म जवान र curmudgeonly हुन सक्छ, तर म मेरो जीवन को लागी देख्न सक्दिन किन मान्छेहरु समय को लागी लिन्छन् यी चीजहरु को बारे मा केहि बढी आत्म सजग हुन। विशेष उल्लेख (राम्रो मनसायले) प्रेरणादायक उद्धरणकर्ताहरूमा जानु पर्छ जसको धार्मिक र अध्यात्मवादी फोहोरले मलाई फ्रिज बनाउँछ जब यो फिडमा देखा पर्दछ।
सेप्टेम्बर 24, 2013 मा 6: 42 AM
# १ र # with सँग असहमत, सबैले ट्विटरलाई बिभिन्न कारणहरूको लागि प्रयोग गर्दछन्, र व्यक्तिहरू पछ्याउनको लागि विकल्पहरू छैनन्, समग्रमा यो एक राम्रो राम्रो सूची हो।
सेप्टेम्बर 24, 2013 मा 10: 07 AM
म सहमत छु - र मलाई वास्तवमा कुनै पनि युवा नियमहरू छन् कि कसरी "नियम" को सूची मनपर्दैन।